Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Kunokutshiwo ukuba Switzerland ibizwa kakuhle eyaziwa ngokuba encopho yayo ngekhephu kunye itshokolethi esimnandi, kodwa akukho kakhulu ngakumbi kwilizwe elihle ngaphezu kwelikubonayo. Ukuqeqesha Uhambo e Switzerland yenye yeendlela eziphambili ukonwabela emaphandleni elihle….
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Italy ezinye uhambo ngololiwe emangalisayo. Kuye inani koololiwe amahle kunye nezikhululo olugqibeleleyo kulo lonke elo lizwe, kodwa apho i uhambo uloliwe wokuqala eyenziweyo Italy? Eli nqaku lalibhalelwe ukufundisa ngoTyelelo loLoliwe kwaye yenziwa nguSave A…